Asa fanompoan’ny fahatsaram-piainana
“Ary Jesosy nadeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin’ny synagoga sy nitory filazantsaran’ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin’ny rofy rehetra. Ary nony nahita ny vahoaka Jesosy, dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry” Mat. 9:35,36
Ny Tompo dia nanatanteraka mandrakariva asa soa maro izay fanompoam-pitiavana, ary izany ihany koa no tokony hataon’ny mpitory ny filazantsara tsirairay. Nanendry antsika ho ambasadaorony Izy, mba hampandrosoantsika ny asany eo anivon’izao tontolo izao. Atolotra ho an’ny mpiasa tsirairay marina sady feno fahafoizan-tena ity iraka ity: “Mandehana any amin’izao tontolo izao hianreo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra” Mar. 16:15
Vakio tsara ny torohevitra nomena ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ny asa izay notanterahin’Ilay Mpampianatra lehibe niaraka taminn’y mpianany no ohatra harahintsika eo amin’ny asa misionera fitsaboana ataontsika. Saingy, moa ve mba narahintsika izany ohatra izany? Tokony hotorina manerana ny tanàna madinika sy vohitra ary tanàan-dehibe tsirairay ny vaovao mahafalin’ny famonjena.
Saingy aiza kosa ireo mpiasa misionera maro? Izao no fanontaniako, amin’ny anaran’Andriamanitra: aiza ireo mpiara-miasa amin’Andriamanitra? Amin’ny alalan’ny fahalianantsika tsy misy fitiavan-tena amin’ireo izay mila fanampiana ihany no hahafahantsika naneho amin’ny fomba azo tsapahin-tanana ireo fahamarinan’ny filazantsara. “Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan’andro, ka misy aminareo manao aminy hoe: Mandehana aminn’y fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an’ny tenany, inona moa no soa azo amin’izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy” Jak. 2: 15-17. “Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana; fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin’ireo” 1 Kor. 13:13
Mihoatra lavitra noho ny toriteny fotsiny ihany no fonosin’ny fitoriana ny filazantsara. Tsy maintsy azavaina ny sain’ny tsy manam-pahalalana; tsy maintsy hatraka ny kivy; tsy maintsy sitranina ny marary. Tokony hanana ny anjara toerany ao amin’ny asan’Andriamanitra ny feon’olombelona. Ireo teny malefaka, feno fangorahana sy fitiavana dia ho vavolombelon’ny fahamarinana. Ireo vavaka feno hafanam-po sy tena vokatry ny fo tokoa dia tokony hisarika ireo anjely ho akaiky kokoa.
Ny fitoriana ny filazantsara eo amin’izao tontolo izao no asa nankinin’Andriamanitra amin’ireo izay mandroso amin’ny anarany. Tokony ho mpiara-miasa amin’i Kristy izy ireo, hiseho amin’ireo izay vonona ny hamono ny fitiavany malefaka sy feno fitserana.